Rafi-pampianarana vaovao :: Hanaovana tombana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana amin’ny jona • AoRaha
Rafi-pampianarana vaovao Hanaovana tombana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana amin’ny jona
Ankamantatra. Tsy mbola voafaritra na hisy fiovana na tsia ny votoantiny na ny fanatanterahana ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana na ny PSE. Aorian’ny tomban’ezaka voalohany hatao amin’ity rafi-pampianarana vaovao ity, izay hotanterahina ny 10 hatramin’ ny 12 jona ho avy izao no hamaritana izany.
“Fotoana io hijerena hoe aiza ho aiza no efa vita hatramin’ny taona 2017 nanaovana ny fandrafetana azy hatramin’izao. (…) Tsy voafa-ritra ao anatin’izany na hisy ny fiovana na tsia amin’ireo teboka voarakitra ao anatin’ny PSE”, hoy i Tiana Désiré, mpandrindra nasionalin’ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam- pirenena , ny fampianarana teknika ary ny fiofanana araka asa, raha nanontaniana, omaly.
Anisan’ny handray anjara amin’io tomban’ezaka hataon’ny minisitera sy ny mpamatsy vola ary ny mpisehatra samihafa io ihany koa ireo avy amin’ny sekoly tsy miankina. Efa nandray anjara tamin’ny fanakianana ity rafi-pampianarana vaovao ity rahateo izy ireo. Voafantina handray anjara amin’izany ihany koa ny solontena avy ao amin’ny sekoly katolika. Ireto farany izay mbola handroso hevitra ny amin’ny fanatanterahana io rafi-pampianarana vaovao io hatrany.
Anisan’ny teboka hafa hatolotr’izy ireo etsy an-danin’izany ny fampiakarana ny tambin-karama homen’ny fanjakana ireo sekoly tsy miankina mba hahatratrarana ny karama farany ambany ho roa hetsy ariary sy ny maro hafa.
“Mbola mitohy ny adihevitra mahakasika ny PSE. Misy ny fandrosoana hevitra mahakasika ireo teboka tsy mety amin’ny sekoly tsy miankina katolika, ka anisan’ny handraisany anjara amin’ny tomban’ezaka ho an’ny PSE io”, hoy i Tsarasidy Marcellin, talen’ny Ofisim-pirenena mikasika ny sekoly tsy miankina na ny ONEP nandritra ny fankalazana ny andron’ny sekoly katolika teny Antanimena , omaly. Notsindrian’ny tale jeneralin’ny ONEP fa sekoly tsy miankina manodidina no handray anjara amin’ny andrana hatao mahakasika ity PSE ity amin’ny fanatanterahana ilay fandaharam-pianarana vaovao ho an’ny kilasy fahafolo.
Kitra – « Telma Coupe de Mada » :: Hanao famaranana tsy misy an’i Rija sy Ando ny CNaPS Sport